Tsvaga mamwe emamwe mabvudzi anobata kumeso ebvudzi rakanaka | Bezzia
Susana Garcia | 02/05/2021 20:00 | Runako, Hairstyles
El bvudzi rakanaka rinowanzo kuve nematambudziko akati wandei uye chimwe chazvo ndechekuti haina huwandu hwakawanda. Kana izvi zvikaitika, izvo zvatinoedza kuita kuti zvionekwe kunge zvinopenya uye zvakawanda, zvine hupenyu hwakawanda. Ndokusaka paine mamwe magadzirirwo ebvudzi uye akachekwa ayo anogona kukubatsira kugadzira iwo masitayera mune rako bvudzi rinoita kuti ukanganwe kuti akanaka uye kwete rakanyanya bvudzi. Kune mamwe magadzirirwo ebvudzi aunovandudza nawo kutaridzika kwebvudzi rako.
ari vanhu vane bvudzi rakanaka vanofanira kuichengeta zvakanaka uye funga nezve maitirwo acho kuti ape chinotaridzika uye chine hutano kutaridzika. Pamusoro pekuchengetwa kwechigadzirwa, ichokwadi kuti chitarisiko chinoenderana nekuti tinogadzirisa sei vhudzi redu, sezvo tichigona kugadzira mutoo wakasiyana zvachose.
1 Yakafananidzwa midi mane
2 Shinga nepixie
3 Tousled-mhedzisiro kuruka
4 Bob akacheka nemafungu
5 Kuchena kwebvudzi
Yakafananidzwa midi mane
Kunyangwe bvudzi rinogona kukubatsira kuti ugadzire mane rinotaridzika kana bvudzi rako rakanaka. Iyi ndeimwe yesarudzo dzakajairika, nekuti kana bvudzi rikagurwa zvakaenzana, unonzwa kuti rakanyanya kudarika kana uchiridambura mumatanho, nekuti izvi zvinoderedza vhoriyamu. Iyo Midi bvudzi rakasakara uye imhando yebvudzi iyo inogona kugadziriswa zviri nyore kwazvo. Zvinotipa kugona kuita zvakasiyana-siyana nekuti tinogona kushandisa zvishongedzo zvevhudzi uye kugadzira magadzirirwo ebvudzi kana kuzvipfeka zvakasununguka Ichowo chimwe chemafashoni echinyakare echinyakare, saka haufanire kurega kuchipfeka. Iwe unogona kuipa imwe vhoriyamu kana mafungu uye izvi zvinogadzira yakatowanda kutaridzika, ichivanza bvudzi rakanaka.
Pixie kucheka bvudzi zvakare sarudzo huru. Iyo pixie ndeyekuti rakapfupika bvudzi asi inoratidzika kunge yakanaka kune wese munhu, ine mhando dzese dzebvudzi. Iyo pixie yakatemwa iri nyore kwazvo kuigadzirisa uye inotibatsira kuti tive nechitarisiko chemazuva ano uye chinotyisa, kunyange chiri chinotyisa uye kwete munhu wese anofarira kupfeka bvudzi ravo rakapfupika. Iyo yakakwana kana iwe uinewo bvudzi rakatwasuka sezvo risingazopete.
Imwe yebvudzi yatinogona kuita kana tiine bvudzi rakanaka uye refu ndeyekugadzira imwe yeaya mabvudzi ane kumwe kubata kwakashata nekuti kunovapa vhoriyamu. Mune ino kesi tiri kutaura nezve kuruka. Kana tikachigadzira chaizvo, bvudzi rakanaka rinooneka, asi kana iyo isu tinokanganisa zvishoma maitiro acho anozosiyana. Zviri nyore kwazvo kuona kuti vhudzi rine vhoriyamu sei kana chirukwa chakaburitswa zvishoma, saka mhedzisiro inobatsira rudzi urwu rwebvudzi.
Bob akacheka nemafungu
El bvudzi rakanaka rinofanira kunge rakagadzirwa mumafungu, nekuti kana tikatwasanudza zvizere tichangoita kuti iratidzike kunge yakanaka. Bhabhi rakatemwa rakadzoswazve uye rakapfekwa rakapfupika uye rakaenzana. Kuwedzera mamwe mafungu kune iri bvudzi izano rakanaka sezvo richipa rakawanda kufamba uye maitiro.
Kuchengeta uye kugadzira vhudzi rakanaka tinofanira kufunga nezvezvimwe zvinhu. Imwe yacho ndeyekuti zvirinani kamura vhudzi uye urimise nebhurashi rakakomberedza uye nekuomesar, asi zvakare nedhizaiti yekuita masaisai nenzira yakapusa. Dzivisa otwasanudza ayo anonatsa zvachose bvudzi rako, sezvo zvichizoratidzika kunge zvine vhoriyamu shoma. Bvudzi iri rinofanirwawo kuchengetwa nekuti rinotyoka zviri nyore, saka rinofanirwa kukweshwa zvine hungwaru uye nemabhurashi akanaka echisikigo. Kana tikapfeka iro rakapfupika, rinova risinganyanyi kusungana, asi kana rakareba, tinofanira kuedza kurisunungura kubva kumagumo kuti tirege kurityora.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Runako » Masitaira ebvudzi akanaka